Inonakidza Televivheni uye nzvimbo dzepaIndaneti dzichagogodza masokisi ako kubva ... mune ZITA ROSE! Ngatishandisei Temain Award yakakosha yekugadzira ruzivo rwekubudisa michina yekuunza madhongi kuburikidza nemasuo ako paSvondo Rutsva! Kuchinja nguva ndeye 5-7 yebhizimisi mazuva ... saka HURRY nguva isati yasvika!
SKU: 60 TV NYE Mavara Category: Misc
Dhidhiyo DJ Video Drop
Mhepo inoputika yezvikamu zvinokonzera kuti itaure chiratidzo chako. Flashy uye futuristic, vhidhiyo iyi inogona kukurudzirwa nemutambo audio kuti ishandiswe sezere paIndaneti yekutsvaga, kana kuiswa pachivako kana usina vhidhiyo yemhando yose.
Sango reSango Logo
DJ intro intro in the style of the Lion's Gate logo. Chiitiko chekare, zvinonyangadza zvinofungidzirwa zvakare kufungidzirwa ne DJ yako zita uye tsika. Iyi DJ video ndeyechokwadi kuti ibate. Yakakura sekutsvaga DJ pakutanga pakutanga kana kuti yakagadzirirwa, kuvhara husiku kana, kuvhara, pakati pekunze. Kufanana neyese DJ yedu inodonha uye DJ mavhidhiyo iyi inofanirwa, yakakwirira, High Definition video. BADZA tsika yaMurume kana yaMukadzi yakataura chikamu kuvhidhiyo ye $ 50 chete.
Rimwe redu rakakurumbira dj video madonhwe pasi rose. Kutungamirirwa mushure mekusaremekedza kwedu "NYE Countdown 2013", takaita izvi ZVINOKUDZIDZWA HAVE Dj intro yevhidhiyo ye arsenal yako! Zita rako nekambani kana kambani yekambani inowedzerwa kune vhidhiyo inoyevedza pasina chekuwedzera mari. "MESDAMES ET MESSIEURS, ndingazvicherechedza ZVIMWE ZVIRI NEZVAPUPUPU ZVAKWADI. 'ZVAZVO KUFUNGA ICHINHU.' Pano tinoenda! ' (kuputika) Dj (ZITA RAKO) kubva (CLUB kana COMPANY - CITY / TOWN) ... Bitches! " (Zvichida)
ZVAKATENGA KUNA KUNA KUNA KUNA KUNA! Vhidhiyo yakawanda inodonha kuchinja kubva kuBPM mbiri dzakasiyana! "Mukusanganiswa kweavo uye maviri - (kuputika), Uyu ndiye Dj (WAKO NAME) kubva (CLUB kana COMPANY NAME)! * kuwedzera kuwedzera logos yako mukati memavhidhiyo pasina chekuwedzera mari!